शिक्षा Archives - Page2of 24 - Dna Nepal
पत्रकार पराजुलीको कथासंग्रह कुमाता पोखरामा २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:२९
पोखरा, फागुन २९ । महिलाको यौन मनोविज्ञानमा आधारित पत्रकार वसन्त पराजुलीको कुमाता कथा संग्रह सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पराजुलीले आफ्नो कथासंग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् । गत सोमवार चितवनमा गृह..
सामाजिक सुरक्षा भत्ता जाँड रक्सीमा ! २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:१०
चितवन, फागुन २२ । तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष बिमल गुरुङले सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ठूलो अंश जाँडरक्सीमा खर्च हुने गरेको निश्कर्ष निकालेका छन् । वडा कार्यालयका तर्फबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वडाध्यक्ष..
अबदेखि पोखरामा नै रहेर पनि जे–टेष्ट परिक्षा दिन मिल्ने २९ माघ २०७६, बुधबार ११:५३
पोखरा, माघ २९ । पोखरामा रहेका जापानीज् भाषा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी पोखरामा नै कम शुल्कमा जे–टेष्ट परिक्षा दिन मिल्ने भएको छ । सो को बारे बुधबार पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जानकारी गरार्ईएको हो । सांग्रिला एजुकेसन..
“सीप हुन्छ हातमा रोजगारी साथमा” भन्ने नाराका साथ प्राविधिक शिक्षा सचेतना अभियान शुभारम्भ
पोखरा, माघ २९ । “सीप हुन्छ हातमा रोजगारी साथमा” भन्ने नाराका साथ पोखरामा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको बारेमा जनसचेतना अभियानको शुभारम्भ भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) पोखरा प्राविधिक शिक्षालय मार्फत..
अहिलेको शिक्षाले बेरोजगारी मात्र बढाएको छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल २६ माघ २०७६, आईतवार १२:१६
सर्लाही, माघ २६ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अहिलेको शिक्षाले बेरोजगारी मात्र बढाएको बताएका छन् । आइतबार सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–२, सानो जगतपुरमा रहेको आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उनले वर्तमान..
संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि शुरु १६ माघ २०७६, बिहीबार १०:४०
दाङ, माघ १६ । दाङमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले बेलझुण्डीमा विद्यावारिधि (पिएचडी) को कक्षा शुरु गरेको छ । विश्वविद्यालयले विगतदेखि नै विद्यावारिधिको कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयमै..
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तालाबन्दी अझै खुलेन ८ माघ २०७६, बुधबार १०:०४
काभ्रे, माघ ८ । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा (केयू)आन्दोलनरत पक्षद्वारा अझै तालाबन्दी नखुल्ने सङ्केत देखिएको छ । आफ्ना मागको सम्बोधन नभएको जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो पटक गत पुस १६ गतेदेखि केन्द्रीय हाताका डीन कार्यालय,..